Okpomoku nke ndi Sudan, nke ndu ma obu ekpomoku n’abali? - Afrikhepri Foundation
Na 16 nke ikpeazụ nke February, akwụkwọ akụkọ South Sudan Tribune bipụtara otu isiokwu banyere ngwaahịa nke Sudan bụ onye kasị emepụta ụwa: gum arabic. N'okpuru aha "Sudan emelitere 42 tons of gum Arabic na United States na 2013-OFFICIEL" akwụkwọ akụkọ ahụ na-agwa ya n'enweghị nkọwa ọ bụla, ma ọ bụ ihe gụpụtara arabic arabic, ma ọ bụ na ọ dị mkpa maka mba ahụ ma ọ bụ na mmekọrịta azụmahịa n'etiti Sudan na United States, ma na-akpachara anya ka ị ghara ịkpọ aha ụlọ ọrụ kachasị mkpa nke asụsụ arabic bụ isi: Coca-Cola.
Gum Arabic dị oke mkpa na e nwere na Sudan a Council nke Arabian Gum: The GAC. Ọ bụ ihe dị mkpa dị mkpa na nke dị oke mkpa. Onye odeakwụkwọ GAC bụ Abdel-Magic Abdel-Gadir kpughere n'ihu ọha na Sudan ebufula 42 ton nke gum arabic na United States na 2013, ọnụ ọgụgụ nke 103 nde dollar. O kwuputala amụma nke 55 tọn maka 2014, ebe ọ na-agbakwụnye na "United States na-aga n'ihu ịbubata chin arabic arabic site na Sudan n'ụzọ dị mfe".
Akwụkwọ ahụ na-akọwa nkenke na "Sudan dị na ndepụta nke mba na-akwado iyi ọha egwu na United States kemgbe 1993." A na-ekwukwa na "Sudan na-agbaso iwu mmepe akụ na ụba ụwa kemgbe 1997". "Otú ọ dị, na 2010, United States kwupụtara na a na-ebuli akwụkwọ ikike maka ngwá ọrụ ugbo na ọrụ, nke ga-eme ka ụlọ ọrụ iri na abụọ nweta akwụkwọ ikikere mbupụ."
Ufodi ndi isi ochichi ochichi Sudan kwusiri ike mgbe nile na "otutu ulo oru US na ezere iwu ndi oru aku n'uba site na ime mkpebi ikpe iwu" na mpaghara ufodu iji mee ka ha nwee ike itinye "ulo oru ugbo na Sudan"
N'ikpeazụ, isiokwu ahụ na-agbakwụnye, sị, "Sudan ejiriwo mee ka ndị mba Amerịka tinye nrụgide na-adabere na ndị arabic arabic ka ha wee bulie akwụkwọ ahụ, site na ịkọwa mkpa nke ngwa a maka ahịa ndị North America". "United States ewepụghị gọọmenti arabic site na iwu, n'ihi na ihe kachasị mkpa nke ihe oriri a maka nri na ụlọ ahịa ọgwụ".
Kedu ihe bụ eziokwu dị n'azụ ihe a nile?
Gum arabic bụ akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ nri na ụlọ ọgwụ, ọ bụ n'ezie akụkụ E414, na-anọ n'ọtụtụ ihe oriri maka oriri kwa ụbọchị. A na-ejikwa ya maka viscosity ma ọ bụ dị ka thickener na emulsifier maka ịme gelatinous sweets ma ọ bụ marshmallows. Ọ bụkwa ihe mpempe akwụkwọ dị na ihe osise, akwa ákwà, ihe mgbaze, bitumen, adhesives, akwụkwọ siga, mkpuchi ọgwụ, na-egbu egbu cream, waya, ọkụ ọkụ ... Ma isi ahịa zuru ụwa ọnụ nke gum arabic bụ Coca-Cola, ọ na-erepịa ihe dị ka sugar, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ndị doro anya siri ike ịchọta na Ịntanetị, ikekwe n'ihi ihe nzuzo nzuzo a ma ama ...
A na-emepụta ihe a, nke a makwaara dị ka acacia gum, na Sahel, si Senegal ruo Somalia, ọ bụ ezie na a na-etokwa ya na Arabian Peninsula. Ka o sina dị, na 2007 dịka ọmụmaatụ, Sudan, Chad na Niger na-enye 95% nke mmepụta ụwa. Sudan na-emepụta ihe gbasara 80% nke mmepụta nke afọ ụwa, n'agbanyeghị obere mgbanwe site na otu afọ ruo na-esote.
N'okwu a na Sudan Tribune, ụfọdụ ihe nwere ike ịgụ n'etiti ederede:
- Nsogbu ndị Sudan na-ezo aka n'isiokwu ahụ laghachi na 2007, mgbe onye nnọchianya Sudan nọ na United States, na nnọkọ ogbako, mere ka Coca-Cola nwee ike, na-eyi United States egwu nye gumhom arabic ma ọ bụrụ na emeghị ka akụ na ụba na obodo ya dị elu. Naanị ikikere e welitere bụ na banyere "ngwaahịa ugbo" a. N'ihi ya, egwu ahụ abaghị uru, ma e wezụga na onye nnọchianya a kwụsịrị ọrụ ya n'afọ ahụ ...
- Ihe ka ọtụtụ n'ime ahia ndị a na-eme site na ahịa ojii, na-akwadoghị. Site na "isi" aha nke isiokwu ahụ na-ezo aka na onu ogugu nke ochichi Sudan, ma a ga-eme ka ọnụ ọgụgụ a mụbaa site na otu puku mmadụ ma ọ bụrụ na a gụọ ndị na-ereghị akwụkwọ. Ihe maka gum arabic bụ 60 000 kwa afọ. Otú ọ dị, Sudan na-emepụta 80% na Coca-Cola na-erepịakwa ọtụtụ ... ihe ndekọ ụlọ ọrụ dị n'etiti mbupụ, mbubata na uru ndị e mepụtara doro anya nwere ụfọdụ ọdịiche iji mejupụta ...
- E nwere ihe ndị ọzọ, ma e wezụga mmanụ na gas, nke na-akpata nchikota-agha-eme ihe ike ma dakwasị na mba Africa.
- Coca-Cola dị ike nke na ọchịchị United States nwere ike ịgbanwe iwu mba ụwa ka o wee nwee ike ịnweta ezigbo ihe.
- Ndi oru mgbasa ozi Sudanese ekwenyeghi aha Coca-Cola. Ụlọ ọrụ a nke na-akwalite ya site n'ikwu na ihe niile bụ naanị ọṅụ, na coke dị n'aka, dị ka ọ dị, na ndụ dị adị, iji gbasaa egwu karịa ọṅụ.
Ntughari: Nchoputa Nnyocha
AHỤ : http://www.africaenmente.blogspot.be
Ndi Apollonius nke Tyana bu “ezi” Kraist?